Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.4.1 သက်တမ်း
အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်မှုစုံလင်သည်နှင့်သုတေသီများဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများကိုဖော်ပြရန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရတီထွင်ကြပြီ။ သက်တမ်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုအချို့သောပိုပြီးယေဘုယျကောက်ချက်ကိုထောက်ပံ့သောအတိုင်းအတာကိုရည်ညွှန်းသည်။ စာရင်းအင်းနိဂုံးတရားဝင်မှု, ပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှု, တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြင်ပသက်တမ်း: လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကလေးမျိုးရှိသည်သို့တရားဝင်မှုခွဲထွက်ဖို့ကအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပြီ (Shadish, Cook, and Campbell 2001, Ch 2) ။ ဤအသဘောတရားများကိုကျွမ်းကျင်သင်တစ်ဦးစမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ critiquing နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းပေးသွားမှာပါနှင့်ကသငျသညျအခြားသုတေသီများနှငျ့ဆကျသှယျကူညီပေးပါမည်။
စာရင်းအင်းနိဂုံးသက်တမ်းစမ်းသပ်မှု၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှန်ကန်စွာပြုလေ၏ရှိမရှိပတ်ပတ်လည်စင်တာ။ ၏အခြေအနေတွင် Schultz et al. (2007) ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းသူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့ရဲ့ p-တန်ဖိုးများကိုတွက်ချက်ခြင်းရှိမရှိအပေါ်ဗဟိုပေလိမ့်မည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤစာစောင်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုအပျစာရင်းအင်းအခြေခံမူဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ပြောင်းကြပြီမဟုတ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဒီဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒေတာကိုပတ်ဝန်းကျင် (ကုသမှုသက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခန့်မှန်းရန်စက်သင်ယူမှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဥပမာအသစ်စာရင်းအင်းအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပါဘူး (Imai and Ratkovic 2013) ) နှင့်ကွန်ပျူတာအသစ်စိန်ခေါ်မှုများ (ဥပမာ, ဧရာစမ်းသပ်ချက်အတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်း (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) ။
ပြည်တွင်းသက်တမ်းစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိပတ်ပတ်လည်စင်တာ။ ၏စမ်းသပ်မှုမှပြန်လာသော Schultz et al. (2007) , ပြည်တွင်းရေးသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို Random, ကုသမှု၏ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များ၏တိုင်းတာခြင်းပတ်ပတ်လည်ဗဟိုနိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သုတေသနလက်ထောက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်မီတာဖတ်ဘဲစိုးရိမ်နေကြဖြစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဤပြဿနာကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြသူတို့ကနှစ်ကြိမ်ဖတ်မီတာတစ်နမူနာရှိခဲ့ပါတယ်; ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရလဒ်များကိုအခြေခံတူညီခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက '' စမ်းသပ်မှုမြင့်မားပြည်တွင်းရေးသက်တမ်းရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပေမယ့်ဒီအစဉ်အမြဲကိစ္စတွင်မျှမက, ရှုပ်ထွေးသောလယ်​​ပြင်နှင့်အွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက်မကြာခဏပြဿနာများအမှန်တကယ်လက်ျာလူမျိုးကိုညာဘက်ကိုကုသပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်လူတိုင်းအတွက်ရလဒ်များတိုင်းသို့ပြေး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းခံယူဖို့နဲ့အားလုံးပါဝင်သူများအဘို့ရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာရန်ထင်နေကြတယ်သောသူတို့အဖို့ဒီဇိုင်းအဖြစ်ကုသမှုကိုအပ်ကြောင်းသေချာစေရန်စေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြည်တွင်းရေးသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျှော့ချကူညီပေးနိုင်သည်။
ဒေတာများနှင့်သီအိုရီ Construction အကြားပွဲစဉ်တဝိုက်သက်တမ်းစင်တာများတည်ဆောက်။ အခန်း2မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. စိတ္တဇအယူအဆကလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီစိတ္တဇသဘောတရားများကိုအစဉ်အမြဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်တိုင်းတာမရှိကြပါဘူး။ မှပြန်လာသော Schultz et al. (2007) , လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင် injunctive သောပြောဆိုချက်ကို "တရားရုံးမိန့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း" (ဥပမာအနေနဲ့အီမိုတီကွန်) manipulate မယ်လို့နှင့် "လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှု" ကိုတိုင်းတာရန်တစ်ဦးဆေးကုသမှုဒီဇိုင်းသုတေသီတွေကလိုအပ်သည်။ Analog စစမ်းသပ်ချက်များတွင်များစွာသောသုတေသီများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကုသဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုအတတ်နိုင်ဆုံး, အစမ်းသပ်ချက်ကိုလေ့လာသည့်စိတ္တဇ Construction ကိုက်ညီ, ထိုသေချာ။ ကုမ္ပဏီတွေသို့မဟုတ်အစိုးရများနှင့်အတူဘယ်မှာသုတေသီများမိတ်ဖက်ကုသကယ်နှုတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်-On ကိုသုံးဒေတာစနစ်များရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ခုနှစ်, စမ်းသပ်မှုများနှင့်သီအိုရီ Construction အကြားပွဲစဉ်လျော့နည်းတင်းကျပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်မ Construction သက်တမ်း Analog စစမ်းသပ်ချက်ထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပိုကြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြင်ပသက်တမ်းဒီစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုအခြားအခြေအနေများမှယဘေုယမယ်လို့ရှိမရှိပတ်ပတ်လည်စင်တာ။ မှပြန်လာသော Schultz et al. (2007) အထဲတွင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်အမှုကိုပြုလျှင်, တစျဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒီတူညီတဲ့စိတ်ကူး-ပေးကလူသတင်းအချက်အလက်ဟာသူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူများနှင့်တစ်ဦးတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းများ signal ကို (ဥပမာ, တစ်ဦးအီမိုတီကွန်) -reduce စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုကြလိမ့်မည်ကိုမေးနိုငျ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား setting ကို? အများဆုံးကောင်းစွာဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းစွာ-run စမ်းသပ်ချက်အဘို့, ပြင်ပသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်ဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အတိတ်ကာလ၌, ပြင်ပသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဤအငြင်းခုံမှုများမကြာခဏလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရပ်ဌာန၌, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့နှင့်အတူပြုမိခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရပြီအဘယျစိတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေမယ့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့လူ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကဤအချက်အလက်အခမဲ့ထင်မြင်ချက် ကျော်လွန်. ရွှေ့နှင့်မျက်မြင်လက်တွေ့ပြင်ပသက်တမ်းအကဲဖြတ်ရန်သုတေသီများနိုင်ပါတယ်။
ကနေရလဒ်တွေသောကြောင့် Schultz et al. (2007) ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တို့က, Opower အမည်ရှိကုမ္ပဏီပိုပြီးကျယ်ပြန့်ကုသမှုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ utilities နှင့်အတူပူးပေါင်း။ ၏ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီး Schultz et al. (2007) , Opower နှစ်ခုအဓိက module တွေ, တစ်ဦးအီမိုတီကွန်နှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု (ပုံ 4.6) လျှော့ချများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုပံ့ပိုးတယောက်နှင့်အတူ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအားအိမ်ထောင်စုရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုဆွေမျိုးဖြင့်တဦးတည်းခဲ့စိတ်ကြိုက်မူလစာမျက်နှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သုတေသီများနှင့်အတူပူးပေါင်း, Opower ပြည်ထဲရေးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်သို့ပွေးလေ၏။ ဤအစမ်းသပ်ချက်အတွက်ကုသမှုပုံမှန်အားဖြင့်ဟောင်းနွမ်းခေတ်ခရုမေးလ်-ရလဒ်ကိုမှတဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-များသောအားဖြင့်ကယ်နှုတ်ခဲ့ကြသော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှာ devices များ (ဥပမာ, ပါဝါမီတာ) ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ အဲဒီအစားကိုယ်တိုင်တစ်ဦးချင်းစီအိမျတျောကိုလာရောက်လည်ပတ်သုတေသနလုပ်ငန်းလက်ထောက်နှင့်အတူဤအချက်အလက်စုဆောင်းထက်, Opower စမ်းသပ်ချက်အားလုံးအာဏာကိုဖတ်ကြားဝင်ရောက်ဖို့သုတေသီ enable လုပ်ထားခြင်းအာဏာကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အနိမ့် variable ကိုကုန်ကျစရိတ်မှာအကြီးအကျယ်စကေးမ​​ှာ run ခဲ့ကြသည်။
ပုံ 4.6 in: အဆိုပါနေအိမ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများ Allcott (2011) တစ်လူမှုနှိုင်းယှဉ် Module တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှုခြေလှမ်းများ Module ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်း 10 utility ကိုကုမ္ပဏီများကတာဝန်ထမ်းဆောင် 600,000 အိမ်ထောင်စုနှငျ့ပတျသကျသောစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပထမဦးဆုံးအစုတွင်, Allcott (2011) ပြည်ထဲရေးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာ 1.7% အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုလျှော့ချတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အတာပိုကြီးပိုပထဝီအနေအထားအရမတူကွဲပြားလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကနေရလဒ်များကိုမှသှေးအလားတူခဲ့ကြ Schultz et al. (2007) ။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားသေးငယ်ခဲ့ in: Schultz et al. (2007) အဖော်ပြရန်နှင့် Injection စံချိန်စံညွှန်းအခွအေနအတွက်အိမ်ထောင်စု (ထိုအီမိုတီကွန်တွေနဲ့တ) 5% အားဖြင့်သူတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချ။ ဒီခြားနားချက်များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်မသိရ, ဒါပေမဲ့ Allcott (2011) တက္ကသိုလ်ကကမကထပြုတဲ့ဒီလေ့လာမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်လက်ရေးအီမိုတီကွန်လက်ခံရရှိတစ်ဦးမှတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်အစီရင်ခံစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပုံနှိပ်အီမိုတီကွန်လက်ခံရရှိထက်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးပိုကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါခန့်မှန်းသုံးသပ်သည် အာဏာကိုကုမ္ပဏီ။
ထို့ပြင်နောက်ဆက်တွဲသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်, Allcott (2015) တစ်ဦးအပိုဆောင်း 8 သန်းအိမ်ထောင်စုပတျသကျတစ်ဦးအပိုဆောင်း 101 စမ်းသပ်ချက်အပေါ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအလာမည့် 101 စမ်းသပ်ချက်ခုနှစ်တွင်ပြည်ထဲရေးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာလူတို့သည်မိမိတို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုလျှော့ချစေဆက်လက်ပေမယ်သက်ရောက်မှုများပင်သေးငယ်ရှိကြ၏။ ဒီကျဆင်းမှုများအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်မသိ, ဒါပေမဲ့မပေး Allcott (2015) ကအမှန်တကယ်သင်တန်းသားများကိုအမျိုးမျိုးအသုံးချခံရကြောင့်အစီရင်ခံစာ၏ထိရောက်မှုကိုအချိန်ကျော်ကျဆင်းနေခံရဖို့သည်ထင်ရှားကြောင်းခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။ ပိုများသောအထူးပိုပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒေသများရှိ utilities ပိုအစောပိုင်းကအစီအစဉ်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်ကုသမှုဖို့ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုရှိကြ၏။ လျော့နည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖောက်သည်နှင့်အတူ utilities program ကိုမွေးစားထားသကဲ့သို့၎င်း၏ထိရောက်မှုကျဆင်းထင်ရှား။ , စမ်းသပ်ချက်အတွက် Randomization ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအလားတူဖြစ်ကြောင်းသေချာအဖြစ်ထို့ကြောင့်ရုံ, သုတေသနဆိုဒ်များအတွက် Randomization အခန့်မှန်းချက် (နောက်ကျောနမူနာအကြောင်းကိုအခန်း3စဉ်းစား) တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျလူဦးရေမှသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးတစ် group မှယေဘူယျနိုင်သေချာ။ သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုဒ်များကျပန်းနမူနာကြသည်မဟုတ်လျှင်, General-ပင်တစ်ဿုံဒီဇိုင်းနှင့်ကောက်ယူရာမှပြဿနာဖြစ်စမ်းသပ်မှု-နိုင်ပါတယ်။
အတူတူအဲဒီ 111 အတွက်စမ်းသပ်ချက်-10 Allcott (2011) နှင့် 101 Allcott (2015) လုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျော်ထံမှအကြောင်း 8.5 သန်းအိမ်ထောင်စု -involved ။ သူတို့ဟာတသမတ်တည်းမူလစာမျက်နှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံစာများပျမ်းမျှအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု, California မှာ 300 နေအိမ်များမှ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မူလတွေ့ရှိချက်ကိုထောက်ပံ့မယ့်ရလဒ်ကိုလျော့ချကြောင်းပြသပါ။ ဒီမူရင်းရလဒ်များကိုပုံတူတဘက်, နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အရွယ်အစားတည်နေရာအားဖြင့်ကွဲပြားကြောင်းပြသပါ။ စမ်းသပ်ချက်၏ဤအစုလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အကြောင်းနှစ်ခုထက်ပိုသောယေဘုယျအချက်များဖော်ပြထားသည်။ ပထမဦးစွာသုတေသီများကစမ်းသပ်လည်ပတ်၏ကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်သောအခါပြင်ပသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. လိပ်စာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ empirically နိုင်ပါလိမ့်မည်ကို၎င်း, ရလဒ်ကိုပြီးသားတစ်ဦးအမြဲ-အပေါ်ဒေတာစနစ်ဖြင့်တိုင်းတာခံရလျှင်ဒီဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သုတေသနလုပ်ငန်းပြီးသားမှတျတမျးတငျထား, ပြီးတော့ဒီလက်ရှိတိုင်းတာအခြေခံအဆောက်အဦများ၏ထိပ်ပေါ်မှာစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းလျက်ရှိသည်သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အရေးကြီးသောအပြုအမူတွေများအတွက်ကြည့်ရှုထွက်ပေါ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒုတိယအချက်မှာစမ်းသပ်ချက်၏ဤအစုဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ရုံအွန်လိုင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး; ပို. ပို. သူတို့သည် built ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် sensor များဖြင့်တိုင်းတာအများအပြားရလဒ်များနှင့်အတူနေရာတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
အဆိုပါလေးသက်တမ်း-စာရင်းအင်းနိဂုံးသက်တမ်းအမျိုးအစားများ, ပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှု, တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်, ပြင်ပသုတေသီများဟာအထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်တွေကပိုပြီးယေဘုယျကောက်ချက်ကိုထောကျပံ့ဖြစ်စေအကဲဖြတ်ရန်ကိုကူညီမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းသက်တမ်း-ပေး။ Analog စအသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စမ်းသပ်ချက်ထဲမှာမျက်မြင်လက်တွေ့ပြင်ပသက်တမ်းဖြေရှင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်သင့်နှင့်ကပြည်တွင်းရေးသက်တမ်းသေချာစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်သင့်သည်။ (သော Opower စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့အမှုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့) အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆောက်လုပ်ရေးသက်တမ်း၏ကိစ္စရပ်များကိုဖြစ်နိုင်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စမ်းသပ်ချက်တွင်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။